Izindaba - Ukhiye wemoto unemisebenzi emine efihliwe, ungasindisa izimpilo ngesikhathi esiphuthumayo
Vele opena umnyango wekhumbi
Iningi lemoto likwazi ukuvula kuphela umnyango wekhebhi uma ucindezela ukhiye werimothi, futhi ngemuva kokuwucindezela kabili, yonke iminyango ingavulwa.
Abanye abashayeli bacosha imoto endaweni yokupaka ekude, Uma nje uvula umnyango wekhumbi, bangavimbela abantu ababi ukuba bangene emotweni esihlalweni sangemuva semoto noma emnyango wesihlalo sabagibeli bangaphambili. Ngakho-ke, lo msebenzi osindisa impilo uyigugu ngempela, akunjalo, ikakhulukazi kubashayeli besifazane?
Vala iwindi lemoto
Ngemuva kokuthi imoto imile, cisha injini ngqo, bese udonsa ibhuleki lesandla ukwehla emotweni uhambe. Kepha ngokuzumayo ubheka emuva, uthole ukukhohlwa ukuvala iwindi noma i-sunroof. Uzokwenzenjani ngalesi sikhathi? Kumele ibuyele emotweni, ivule iswishi yokuvula, uvale amawindi ne-sunroof, bese uphinde ukhiye imoto. Ingabe kunenkinga?
Empeleni, iningi labantu alazi, ngemuva kokuthi imoto icishiwe, inqobo nje uma ucindezela bese ubamba inkinobho yokukhiya yokhiye wesilawuli kude, ingilazi kanye ne-sunroof yemoto izovala ngokuzenzekelayo! Kwezinye izimoto, inqobo nje uma kusetshenziswa irimothi yesilawuli kude, wonke amawindi azovuka ngokuzenzekelayo futhi avale. Lo msebenzi usebenza impela, yivangeli likaMartha, haha.
Thola i imoto ngokushesha
Uma ungakwazi ukuthola imoto yakho ngokushesha, ukhiye wemoto unenkinobho angakusiza. Isibonelo, uma uya enxanxatheleni yezitolo futhi upaka imoto yakho endaweni yokupaka engaphansi komhlaba, udinga ukusesha emhlabeni wonke lapho ubuya ukuyokulanda. Ungethuki ngalesi sikhathi. Uma ufuna ukuthola imoto yakho, udinga nje ukucindezela inkinobho ebomvu kukhiye wemoto ukwenza imoto ikhiphe umsindo. Lokhu kuzokwenza kube lula ukuthola imoto yakho, kepha ukuze uqaphele, Ungawusebenzisi lo msebenzi uma kwenzeka isikhathi sokuvela, ngoba sizothinta abanye uma uwusebenzisa.
Amamodeli amaningi wokhiye wesilawuli kude anenkinobho yokukusiza uvule umboko ngokuzenzakalela. Cindezela isikhathi eside inkinobho yokuvula isiqu (kwezinye izimoto, chofoza kabili), isiqu sizovuleka ngokuzenzekelayo. Uma uphuma nje esitolo uphethe izikhwama ezinkulu ngesandla, kuzoba usizo kakhulu ngalesi sikhathi, futhi kunganikeza lula kakhulu ngokuthinta okukodwa.
Isikhathi Iposi: Aug-17-2020